နွေးနွေးထွေးထွေး ဆက်ဆံရေးတွေ ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ Kelly Clarkson နဲ့ Simon Cowell
On May 30, 2018 May 31, 2018 By Aminnyar
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်ရဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့တုန်းက Las Vegas မြို့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ 2018 Billboard Music Awards ပွဲမှာ ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Kelly Clarkson ဟာ “Whole Lotta Woman” ဆိုတဲ့ သီချင်းကို သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာ Simon Cowell ဟာ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Camilla Cabello နဲ့ Rapper တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Pharrell Williams တို့ကို ပွဲလာပရိသတ်တွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ရာအတွက် စင်မြင့်ပေါ်ကို တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Simon ဟာ စင်ပေါ်ကိုရောက်ရောက်ချင်း ဘာမှမပြောရသေးခင် အချိန်ကလေးမှာ အံ့သြသင့်စရာတစ်ခုနဲ့ ကြုံတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ သူမရဲ့အလှည့်ကို သီဆိုဖျော်ဖြေပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့ Kelly Clarkson ဟာ စင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ Simon ရှိရာဆီကို ပြေးလာပြီး အားရပါးရ သိမ်းကြံုးပွေ့ဖက်လိုက်တာကို ခံလိုက်ရလို့ပါပဲ။
“ဒါဟာ တကယ့်ကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာ၊ ကြည်နူးပျော်ရွှင်စရာပါပဲ။ ကျွန်တော် ဘာပြောလို့ပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော် သူ့အတွက် သိပ်ကိုဂုဏ်ယူမိရပါတယ်ဗျာ”
Simon ဟာ သူ့ကို ပွေ့ဖက်ပြီးမှ အထဲဝင်သွားတဲ့ Kelly Clarkson ကို လည်ပြန် တစ်ချက်လှည့်ကြည့်ရင်း ပရိသတ်တွေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၆ နှစ်တာကာလတုန်းက ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ ဒိုင်လူကြီးနဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်သူတွေအဖြစ် စတင်ဆုံဆည်းခဲ့ကြဖူးတာပါ။ ပြိုင်ပွဲက American Idol – Season 1 ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီး ဒိုင်လူကြီးကတော့ ယနေ့ကမ္ဘာတလွှားမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ အနုပညာရှင်တော်တော်များများကို အကဲဖြတ်ပြီး စင်တင်ပေးခဲ့တဲ့ Simon Cowell ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Kelly Clarkson ကတော့ အဲဒီတုန်းက American Idol – Season 1 ရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် တစ်ယောက်ပေါ့။
2002, June 11 ကနေ September4ရက်နေ့အထိ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အဲဒီ American Idol – Season 1 ပြိုင်ပွဲမှာ Simon Cowell အပါအဝင် Paula Abdul နဲ့ Randy Jackson တို့ ဒိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ အကဲဖြတ်ပေးမှုတို့ကြောင့် Kelly Clarkson ဟာ winner ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ သူမဟာ American Idol ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ ပထမဆုံးသော Winner လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ သူမ တောက်လျှောက်အောင်မြင်လာခဲ့တာ ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိပဲဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသားမို့ ပြောနေဖို့တောင် လိုမယ်မထင်တော့ပါဘူး။
Simon Cowell ဟာလည်း အရည်အချင်းရှိတဲ့ ရွက်ပုန်းသီးအနုပညာရှင်တွေကို ရှာဖွေပြီး စင်တင်ပေးတဲ့နေရာမှာ သူမတူအောင် တော်လွန်းတဲ့လူ တစ်ယောက်လို့ အားလုံးက အသိအမှတ်ပြုထားကြပါတယ်။ အနီးစပ်ဆုံး ဥပမာပြရရင် ယနေ့ကမ္ဘာကျော်နေဆဲဖြစ်တဲ့ Westlife, One Direction နဲ့ CNCO စတဲ့ Boybands တွေဟာ Simon Cowell က မြေတောင်မြှောက်ပေးလိုက်တဲ့ အဖွဲ့တွေပါပဲ။
ပြီးတော့ သူဟာ American Idol ပွဲစဉ်တွေမှာသာမက Pop Idol, The X Factor, America’s Got Talent, Britain’s Got Talent အစရှိတဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်း ဒိုင်လူကြီးအဖြစ် လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ သူတစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ လူတော်တွေကို ရွေးတတ်တဲ့ ဒိုင်တစ်ယောက်အဖြစ် နာမည်သိပ်ကြီသလို သြဇာလည်း ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ သူဟာ ဒိုင်လူကြီးလုပ်ရာမှာ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကို အပြစ်ပြောစရာရှိရင် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောတတ်သလို ချီးကျူးစရာရှိရင်လည်း ထင်ထင်ပေါ်ပေါ် ချီးမွမ်းတတ်သူတစ်ယောက်အဖြစ် နာမည်ကြီးလှပါတယ်။ ပြီးတော့ သူရွေးလိုက်တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တော်တော်များများဟာလည်း ယနေ့အနုပညာလောကမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်နေကြသူတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပါပြီ။
These two go way back! ↩ @SimonCowell brings out the next #BBMAs performer, @Camila_Cabello! #CAMILA_BBMAs pic.twitter.com/ShAdlp5g41
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ Simon Cowell ဟာ သူအကဲဖြတ်ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ အောင်မြင်ကျော်ကြားသူတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်သူ Kelly Clarkson ရဲ့ လူပုံအလယ်မှာ ၀မ်းသာအားရနဲ့ ပွေ့ဖက်တာကိုခံလိုက်ရတဲ့အတွက် သူ့ရင်ထဲမှာ သိပ်ကို ပျော်ရွှင်ကြည်နူးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ Kelly Clarkson ဟာလည်း သူမရဲ့ ဆရာသဖွယ်ဖြစ်တဲ့ Simon Cowell နဲ့ ခုလိုပြန်ဆုံရတာကို သိပ်ပျော်ရွှင်ကျေနပ်နေခဲ့လေတာက သူမမျက်နှာပေါ်မှာ အထင်းသားပါ။
တကယ်တော့ သမာသမတ်ကျတဲ့ ဒိုင်လူကြီးတစ်ယောက်နဲ့ အရည်အချင်းရှိတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ယောက်တို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ ပြိုင်ပွဲပြီးသွားတဲ့နောက် နှစ်တွေအများကြီးကြာမြင့်လာတဲ့အထိ နွေးထွေးစွာနဲ့ ခိုင်မြဲနေတတ်တယ်ဆိုတာကို Kelly Clarkson နဲ့ Simon Cowell တို့က လက်တွေ့ပြလိုက်သလို ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
PREVIOUS POST Previous post: ဘဲအသစ်ရနေတဲ့ အဆိုတော်မလေး Avril Lavigne
NEXT POST Next post: Ariana Grande တစ်ယောက် ၁၄နှစ်အရွယ်ကောင်မလေး Millie ကို ဘာတွေပြောလိုက်တာပါလိမ့်